झापा कारागारमा ३५० कैदीबन्दी अँट्ने नयाँ भवन उद्घाटन « Loktantrapost
३ आश्विन २०७८, आईतवार १५:५०
झापा, ३ असोज । प्रशासनिक भवन बनाउन संघीय सरकारले पठाएको बजेटलाई संशोधन गरेर झापा कारागारमा कैदीबन्दी बस्ने थप भवन निर्माण गरिएको छ ।
झापा कारागार परिसरको दक्षिणी खाली भागमा रु. ६४ लाखको लगानीमा दुई तलाको नयाँ भवन निर्माण गरिएको हो । नयाँ भवनको भुइँतलामा पक्की छत र माथ्लो तलाको छानो जस्ता पाताको लगाइएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिम्सिनाले गत फागुनमा शिवरात्रिको अवसर पारेर भवनको शिलान्यास गरेका थिए । आज उनले नै संविधान दिवसको अवसर पारेर भवनको उद्घाटन गरेका हुन् ।
भद्रपुर नगरपालिका वडा नं. ८ मा पाँच दशक अघि बनाइएको झापा कारागारको पुरानो भवनमा अढाई सय कैदीबन्दी अट्ने क्षमता छ ।
पुरानो, जीर्ण र पानी चुहिने अवस्थाको पुरानो भवनमा हाल बाह्र सय कैदीबन्दी कष्टपूर्वक बस्दै आएका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिम्सिनाले संघीय सरकारले कारागारको प्रशासन भवन बनाउन बजेट पठाएको भए तापनि कारागारका कैदीबन्दीको बिजोग अवस्था देखेर बजेट संशोधन गरी कैदीबन्दी बस्ने भवन नै बनाइएको बताए ।
कारागारका प्रमुख (जेलर) राजेन्द्र गौतमले नयाँ भवनमा ३५० जना कैदीबन्दीलाई राख्न सकिने जानकारी दिए । “कर्मचारीहरुलाई प्रशासनिक भवन नचाहिएकोे होइन,” कारागार प्रमुख गौतमले भने–“तर, कारागारभित्र कैदीबन्दी खाँदाखाँद गरेर बस्नु पर्ने दयनीय अवस्था देखेर हामीले उहाँहरुकै लागि भवन थप्नुपर्छ भन्ने सोच्यौं ।”
गत आर्थिक वर्षभित्रै भवन निर्माण गरिसक्ने गरी निर्माण व्यवसायी नन्द कन्स्ट्रक्सन काठमाडौंँले फागुनमा ठेक्का सम्झौता गरेको भए पनि कोभिडकै कारण निर्माणमा केही ढिलो भएको बताइएको छ ।
नयाँ भवन बनेपछि कैदीबन्दीलाई बस्न केही सहज भए तापनि समस्याको पूर्ण समाधान भने भएको छैन । अहिलेको कारागार रहेको स्थानबाट तीन किलोमिटर पश्चिम प्रदेश प्रशिक्षण केन्द्रको १० बिगाहा सरकारी जग्गामा कारागार स्थानान्तर गर्न केही छलफल र प्रक्रिया समेत अघि बढिसकेको थियो । तर कोभिड १९ को महामारीका कारण हाल कारागार सार्ने चर्चा नै हुन छाडेको छ ।
संविधान दिवसको अवसर पारेर कारागारका कैदीबन्दीलाई खेलकुदका सामान आज हस्तान्तरण गरिएको छ । बन्दी पुस्तकालयका अध्यक्ष शेरबहादुर थेबेको अध्यक्ष्तामा भएको कार्यक्रममा सचिव युवराज गिरीले स्वगत र रमेश पोखरेलले सञ्चालन गरेका थिए ।
सोही अवसरमा ज्येष्ठ कारागारबासीका लागि समाजसेवी मीरा थापाले दिएको ५५ इञ्चको एलइडी टेलिभिजन पुरस्तकालयलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा कैद मिनाहा पाएर रिहा भएका १५ जना कैदीबन्दीलाई फुलमाला लगाएर विदाई गरिएको थियो ।
भवन निर्माणमा श्रमदान गर्ने कैदीबन्दी र भवन निर्माणमा सघाउन सघन सहरी विकास कार्यालयका इन्जिनियर राजेन्द्र खतिवडालाई कार्यक्रममा सम्मान गरिएको थियो ।